I-Omnisend: Iqonga ekulula ukulisebenzisa kwi-imeyile ye-imeyile kunye ne-SMS yokuZenzekelayo | Martech Zone
Olunye lolona hambo lonwabisayo kwintengiso ezenzekelayo kulo nyaka, ngokoluvo lwam, ibikukuqhubela phambili kwezisombululo ezifikelelekayo zokuthengisa intengiso yakho ye-ecommerce. Amaqonga ezentengiso okuzenzekelayo kufuneka adityaniswe kwaye iphulo ngalinye liphuhliswe ngokuhamba kwexesha - ukumiliselwa kungathatha iiveki okanye iinyanga ngaphambi kokuba uqale ukubona ingeniso.
Ngoku, la maqonga matsha awanamveliso nje kuphela, banamaphulo akulungeleyo ukumilisela msinyane nje ukuba ubanike amandla. Omnisend lelinye lala maqonga - kunye namaphulo amajelo amaninzi alungele ukuya:
Uthotho lokwamkela -Bamkele ababhalisile bakho abatsha kwaye ubaguqule babe ngabathengi ngeeseti esele zenziwe ze-imeyile ezinobuhlobo.
Ukulahlwa kwemveliso -Fikelela kubathengi ababone iimveliso kodwa bashiya ivenkile yakho ekwi-Intanethi ngaphandle kokuthenga.
Ukulahlwa kwinqwelo -Ukufumana kwakhona iinqwelo ezilahliweyo ngokusebenzisa uthotho olwakhiwe kwangaphambili nge-imeyile ezenzekelayo kunye nemiyalezo yeSMS.
Odola isingqino -Thumela i-odolo yokuqinisekisa i-SMS okanye i-imeyile enerisithi yokuthenga kubathengi bakho kanye emva kokuba bethengile.
Uqinisekiso lokuhambisa ngenqanawe -Nika abathengi bakho uncumo ngokubazisa ukuba iodolo yabo isendleleni.
Ukuthengisa ngokutsha -Qhuba ukuthengisa ngakumbi ngokucebisa iimveliso ezikhuthaziweyo ngokusekwe kwii-odolo zangaphambili zabathengi bakho.
Iqonga alimi apho, Omnisend ikwabandakanya yonke into oyifunayo ukudibanisa idatha yomntu wesithathu, ukwenza umntu, icandelo, uvavanyo lwempembelelo, ukwandisa ukuthengisa kwakho, kunye nengxelo kwinkqubela phambili yakho:
Iibhloko zoMxholo onemiQathango -Yongeza kwaye ubonise iibhloko ezithile zemixholo ye-imeyile ukukhetha kuphela iziqendu zabaphulaphuli.
Ukuzisebenzisela ukwahlulahlula -Cwangcisa izibonelelo zakho ezizodwa kunye nenkuthazo yeendlela zomyalezo ezenzelwe wena ngaphakathi kokuhamba komsebenzi kube kanye.
Uvavanyo lokwahlulahlula i-A / B -Uvavanyo lokujonga ukuba leliphi ijelo, inkuthazo, okanye umgca wesifundo oqhuba uguquko- kwaye wenze izigqibo eziqhutywa yidatha ukuphucula ukuhamba kwakho.
Icandelo - Icandelo labathengi bakho ngokusekwe kukuziphatha kwabo ekuthengeni kunye neepropathi ezininzi ukuphucula ukuguqulwa okujolise kuko, ii-imeyile ezizezakho kunye neetekisi.
Iingcebiso zeMveliso Ukuthengisa umnqamlezo kunye neengcebiso ezinamandla zezinto umthengi ngamnye anokuzithenga.
Ifowuni yeSMS -Yongeza i-SMS kunye namajelo ngakumbi ecaleni kwee-imeyile zakho usebenzisa iqonga elifanayo kwaye unikezele ngamava omthengi ongaguquguqukiyo, omnichannel.
iifomu Iipopu, ukuphuma kwenjongo, iphepha lokufika, iibhokisi zokubhalisa, kunye neefom zeWheel of Fortune zonke zakhiwe ukuphucula ukufunyanwa kwababhalisi bakho.
Imixholo elungiselelwe -Yongeza eyakho imifanekiso kwaye uqale ngokufaka nokuthumela kubafowunelwa kwangoko!
Iingxelo zomyalezo owakhelweyo -Ukulandela umkhondo wentengiso kunye nedatha yokuzibandakanya ukuze ukwenze ukuhamba komsebenzi ngaphandle kokushiya uMhleli wokuZenzekelayo.
Iingxelo zokuZenzekelayo -Ukuntywila-ngaphakathi ekusebenzeni komsebenzi ngamnye ukuthelekisa amajelo awahlukeneyo kunye nokulandela umkhondo wabathengi abaguqukileyo.
INgxelo ePhambili -Hlahlela ingeniso yokuhamba kokuhamba komsebenzi kunye nedatha yokuzibandakanya kwaye ubone okona kuzenzekelayo.
ukuthobela - Qokelela ulwazi oluneenkcukacha malunga nemvume yokuhambelana neTCPA kunye neGDPR.
Omnisend yenza ukuba ubenakho ukusebenzisa idatha yomntu wesithathu ngokulula ukwandisa ubungakanani bomyalezo wakho owenzelwe wena. Yenza uyilo kwaye wenze ngokulula ukuhamba komsebenzi usebenzisa imicimbi yesiko kunye nedatha yokunyaniseka kunye neenkqubo zemivuzo, iidesika zoncedo, iinkqubo zokuphonononga, iinkonzo zokulandela umkhondo, kunye nokunye konke ngelixa usebenzisa uMhleli ofanayo.
Ngonqakrazo olunye lokudityaniswa kweqonga lokudibanisa i-ecommerce, inkxaso ebalaseleyo ye-24/7, kunye nokudityaniswa kwedatha okupheleleyo-ungatshintsha kwaye ufumane ii-automation zakho zokuqala zisebenza nje 30 imizuzu. Ukudityaniswa kwe-ecommerce kubandakanya 29 Okulandelayo, BigCommerce, Magento, I-Opencart, i-Prestashop, Shopify & Ivenkile yokuThengisa, Volusion, yaye WooCommerce.
Cela iDemo okanye uqalise isiVavanyo sasimahla se-Omnisend
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa amakhonkco amdibeneyo Omnisend kunye namaqonga e-ecommerce kweli nqaku.
tags: 29 OkulandelayoBigCommerceukulahlwa kwenqweloukuyeka ii-imeyileUkulahla kwinqwelo itekisiUkulahla inqwelo smseCommerceI-imeyile yokuthengisa ngokuthengisa i-imeyileintengiso ye-ecommerceintengiso ye-ecommerceI-sms zecommerceMagentoukuzenzekela ngokuzenzekelayoukuvula indawoii-imeyile zokuqinisekisaPrestaShopImveliso yokulahla i-imeyileukuthunyelwa kwee-imeyileIvenkile kunye neVenkile yokuThengisaUkulahlwa kwinqwelo othengela kuyoivolusWamkelekile uthotho lwe-imeyilewoocommerce